Phreak စျေး - အွန်လိုင်း PHR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Phreak (PHR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Phreak (PHR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Phreak ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 334 567.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Phreak တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Phreak များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PhreakPHR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0012PhreakPHR သို့ ယူရိုEUR€0.00102PhreakPHR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000918PhreakPHR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0011PhreakPHR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0108PhreakPHR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0076PhreakPHR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0267PhreakPHR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0045PhreakPHR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0016PhreakPHR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00168PhreakPHR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0269PhreakPHR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00928PhreakPHR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00645PhreakPHR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0894PhreakPHR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.202PhreakPHR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00165PhreakPHR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00182PhreakPHR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0373PhreakPHR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00832PhreakPHR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.128PhreakPHR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.42PhreakPHR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.456PhreakPHR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0877PhreakPHR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0331
PhreakPHR သို့ BitcoinBTC0.0000001 PhreakPHR သို့ EthereumETH0.000003 PhreakPHR သို့ LitecoinLTC0.00002 PhreakPHR သို့ DigitalCashDASH0.00001 PhreakPHR သို့ MoneroXMR0.00001 PhreakPHR သို့ NxtNXT0.0959 PhreakPHR သို့ Ethereum ClassicETC0.000178 PhreakPHR သို့ DogecoinDOGE0.358 PhreakPHR သို့ ZCashZEC0.00002 PhreakPHR သို့ BitsharesBTS0.0458 PhreakPHR သို့ DigiByteDGB0.0394 PhreakPHR သို့ RippleXRP0.00426 PhreakPHR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 PhreakPHR သို့ PeerCoinPPC0.00411 PhreakPHR သို့ CraigsCoinCRAIG0.555 PhreakPHR သို့ BitstakeXBS0.0519 PhreakPHR သို့ PayCoinXPY0.0213 PhreakPHR သို့ ProsperCoinPRC0.153 PhreakPHR သို့ YbCoinYBC0.0000007 PhreakPHR သို့ DarkKushDANK0.391 PhreakPHR သို့ GiveCoinGIVE2.64 PhreakPHR သို့ KoboCoinKOBO0.277 PhreakPHR သို့ DarkTokenDT0.0011 PhreakPHR သို့ CETUS CoinCETI3.51